Ọ̀ Bụ Eziokwu na Mmadụ Nwere Ike Ịnwụ Lọghachikwa Na-akọ Ihe Ndị Ọ hụrụ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ọtụtụ ndị ọ fọrọ ntakịrị ka ha nwụọ ekwuola na ọ dị ha ka hà hapụrụ ahụ́ ha pụọ ma ọ bụ na ha chetara na ha hụrụ ìhè na-enwu gbaa, ma ọ bụ ebe mara ezigbo mma. Akwụkwọ bụ́ Recollections of Death sịrị na ‘ụfọdụ weere ya na ihe ahụ merenụ bụ nhụpere ka ha hụpeere otú ụwa ọzọ ma ọ bụ eluigwe dị. Ọ bụ eziokwu na Baịbụl ekwughị gbasara onye ụdị ihe a mere, ma o kwuru ihe ga-enyere anyị aka ịmata na ihe ahụ ụfọdụ ndị sịrị na ha hụrụ abụghị otú ụwa ọzọ dị.
Ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla.
Baịbụl sịrị na “ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị.” (Ekliziastis 9:5) Mmadụ nwụọ, ọ naghị aga ebe ọzọ gaa nọrọ, kama ọ na-akwụsị ịdị adị. Ozizi bụ́ na mmadụ nwụọ na mkpụrụ obi ya anaghị anwụ esighị na Baịbụl. (Ezikiel 18:4) N’ihi ya, ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ikwu na ya chetara mgbe ahụ ọ dị ya ka ọ̀ nwụọla enweghị ike ịbụ otú eluigwe, ọkụ ala mmụọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ dị.
Olee ihe Lazarọs kwuru merenụ mgbe ọ nwụrụ?
Lazarọs Baịbụl kọrọ akụkọ ya nwụrụ anwụ n’eziokwu. Jizọs kpọlitere ya mgbe ọ nọchara abalị anọ n’ili. (Jọn 11:38-44) Ọ bụrụ na Lazarọs nọ na-ekpori ndụ n’oge ahụ ọ nwụrụ, ọ pụtara na ọ bụghị ihe ọma ka Jizọs meere ya kpọlite ya, ya abịaghachi n’ụwa. O nweghị ebe Lazarọs kwuru na Baịbụl na e nwere ihe ọ hụrụ mgbe ahụ ọ nwụrụ. A sị na e nwere, ọ gaara ekwu. Buru n’obi na Jizọs ji ọnwụ Lazarọs tụnyere ụra. Nke a gosiri na e nwetụdịghị ihe ọ bụla Lazarọs ma n’oge ahụ ọ nwụrụ.—Jọn 11:11-14.